လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရတုံ့ပြန်မှု၏အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများမကျူးလွန်သောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါ ၀ င်သူများ (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
comments: ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Voon လေ့လာမှုကို UK မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွင်ဖော်ပြထားသည်။အဆိုပါဦးနှောက်အပေါ် porn"နောက်ဆုံးတော့ထွက်သည်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှသုတေသီများကညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများအားမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲသူများအားတုန့်ပြန်သည့်နည်းတူပင်ညစ်ညမ်းရောဂါများကိုတုံ့ပြန်သည်။ သို့သော်ထိုထက်မကရှိသည်။
compulsive porn အသုံးပြုသူများသည် ( သာ. ကြီးမြတ်လိုသော) porn အလိုအလျောက်ပေမယ့်ထိန်းချုပ်မှုထက်ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (ကဲ့သို့) ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်စွဲ၏လက်ရှိမော်ဒယ်နှင့်အတူဿုံ aligns, နှင့်ပယ်ချ သီအိုရီ "ပိုမိုမြင့်မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုနောက်ကွယ်တွင် မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပျော်မွေ့လိုသောကြောင့်လိုချင်သောကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကိုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်ခံရသည်ဟုယူဆကြသည်။ ဤသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်လူသိများသည် မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု။ ဒီအစွဲရောဂါ၏အမာခံများဖြစ်ပါတယ်။
(မီဒီယာအစီရင်ခံမဟုတ်) အခြားအဓိကတွေ့ရှိချက်ဘာသာရပ်များ၏ 50 ကျော်% (ပျှမ်းမျှအသက်: 25) ခဲ့ကွောငျးအခက်အခဲအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူစိုက်ထူရရှိခဲ့သေး porn နှင့်အတူစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်နိုင်ဘူး။ လေ့လာမှုမှ:
CSB ရှိအမျိုးသားများ၏ပျမ်းမျှအသက်မှာ ၂၅ နှစ်ဖြစ်သော်လည်းဘာသာရပ် ၁၉ ခုအနက် ၁၁ ခုသည်လိင်ကြင်ဖော်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်လိင်စိတ်နည်းခြင်း၊ စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနည်းပါးသော်လည်း၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုဆုချရန်စင်တာကိုပိုမိုတက်ကြွစေသော်လည်း၊ ထို့အပြင်ဘာသာရပ်များသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလိင်ဗီဒီယိုများကိုထိန်းချုပ်မှုထက်မပိုစေခဲ့ပါ။ “ ခေါင်းတလား၌နောက်ထပ်လက်သည်းမြင့်မားသောလိင်အလိုဆန္ဒ "porn စွဲ၏မော်ဒယ်.
ဤသည် porn တွေကိုမှပိုမိုမြင့်မားဆုလာဘ်စင်တာတုံ့ပြန်မှုကြုံနေရစွဲဘာသာရပ်များထောက်ခံပါတယ်။
အဆိုပါ 19 လုလင်က Eleven အခက်အခဲ / တကယ့်ဖက်အတူသော်လည်းမသူတို့၏အကြိုက်ဆုံး porn ဖို့နှိုးဆွတဲ့အနေနဲ့စိုက်ထူရရှိရှိခဲ့ပါတယ်။
CSB နှင့်အတူလူတို့သညျမွငျ့မား generalized လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
၏ရလဒ်များကို အဆိုပါကင်းဘရစ်လေ့လာမှုနှင့်ပြီးခဲ့သည့်လကဂျာမန်လေ့လာမှု (ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက်။ 2014), 2011 စတင်ဖွဲ့စည်းထံမှ YBOP အပေါ်ဤနေရာတွင်န့ ်. ယူဆချက်များအတွက်အလွန်အားကောင်းတဲ့ထောက်ခံမှုပေး။
အတူတကွ2လေ့လာမှုများတွေ့ရှိခဲ့:
YBOP ဗီဒီယိုများနှင့်ဆောင်းပါးများတွင်ဆွေးနွေးထားသောအဓိကစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှု ၃ ခု - ာင်း, desensitizationနှင့် hypofrontality,
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ် ( သာ. ကြီးမြတ်ဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်း) ကိုလျော့နည်း arousal ။
အငယ်တို့သည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူ သာ. အကျိုးကိုစင်တာအတွက် cue-သွေးဆောင် reactivity ကို။
ငယ်ရွယ် compulsive porn အသုံးပြုသူများသည်အတွက်ပညာရေး၏အလွန်မြင့်မားမှုနှုန်း။
Published: ဇူလိုင်လ 11, 2014
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ကို "အမူအကျင့်" စွဲခြင်းနှင့်ဘုံသို့မဟုတ်ထပ်အာရုံကြောဆားကစ်အဖြစ် conceptualized ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းသဘာဝအလျောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့အုပ်ချုပ်စေခြင်းငှါ, နည်းနည်း CSB နှင့်မပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများဖို့တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ဒီနေရာမှာကွဲပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့မူးယစ်ဆေး-cue reactivity ကို၏ကြိုတင်လေ့လာမှုများအတွက်ဖော်ထုတ်အာရုံကြောဒေသများအာရုံစိုက်, CSB နှင့်မပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ 19 CSB ဘာသာရပ်များနှင့် 19 ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဗီဒီယိုများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများနှိုင်းယှဉ်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အကြိုက်၏ ratings ရယူခဲ့ကြသည်။
ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းမှဆွေမျိုး, CSB ဘာသာရပ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများတုံ့ပြန် သာ. ကြီးမြတ်အလိုဆန္ဒပေမယ့်အလားတူအကြိုက်ရမှတ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ Non-CSB ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ် CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့သည့် dorsal anterior cingulate ၏ activation, ventral striatum နှင့် amygdala နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ dorsal anterior cingulate-ventral striatum-amygdala ကွန်ယက်၏ functional ဆက်သွယ်မှုပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ် (သို့သော် like နှိပ်မဟုတ်) Non-CSB ဘာသာရပ်များမှ CSB ဆွေမျိုးတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘွဲ့မှခဲ့သည်. အလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်လိုသောနဲ့အကြိုက်အကြား dissociation အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၌ရှိသကဲ့သို့ CSB အခြေခံမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏သီအိုရီများနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-cue reactivity ကို၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အာရုံကြောကွဲပြားခြားနားမှုယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါး-cue reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဒေသများတွင် CSB ဘာသာရပ်များအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့အောက်ပါ CSB အတွက် corticostriatal limbic circuitry ၏ သာ. ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအာရုံကြော CSB အခြေခံယန္တရားနှင့်ကြားဝင်များအတွက်အလားအလာဇီဝပစ်မှတ်အကြံပြုထားသည်။
ကိုးကား: Voon V ကို, မှဲ့တီဘီ, BANCA P ကို, Porter L ကို, မောရစ် L ကို, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏ (2014) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်စပ်မှုနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်။ PLoS ONE9(7): e102419 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0102419
အယ်ဒီတာ: Veronique Sgambato-Faure, INSERM / CNRS, ပြင်သစ်
Received: မတ်လ 6, 2014; လက်ခံခဲ့သည်: ဇွန်လ 19, 2014; Published: ဇူလိုင်လ 11, 2014
မူပိုင်: © 2014 Voon et al ။ ဒါက၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့ Open-access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်, အရာမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွား, မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်ဖြစ်သည်။
ဒေတာကိုရရှိနိုင်: အဆိုပါစာရေးဆရာတွေ့ရှိချက်အခြေခံအားလုံး data တွေကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအပြည့်အဝရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါ။ ဒေတာအားလုံးကိုစက္ကူအတွင်းထည့်သွင်းထားပါသည်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: Wellcome Trust မှအလယ်အလတ် Fellowship ရန်ပုံငွေ (093705 / Z ကို / 10 / Z ကို) ကထောက်ပံ့ပေးရန်ပုံငွေရှာခြင်း။ ဒေါက်တာ Potenza ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ထံမှထောက်ပံ့ငွေ P20 DA027844 နှင့် R01 DA018647 နေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲန်ဆောင်မှုများ၏ Connecticut ပြည်နယ်ဦးစီးဌာန, အဆိုပါ Connecticut စိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာတွင်; နှင့်တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသား Center မှသုတေသနဆုကိုလောင်းကစားအတွက် Excellence တစ်ရေးစင်တာ။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
CSB တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါသို့မဟုတ် non-ပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ် "အပြုအမူ" စွဲလမ်းအဖြစ်အခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့အဆိုပြုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်အတူအခြေအတင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံး conceptualize မှ ။ ရှိပြီးသားဒေတာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (သို့မဟုတ်လောင်းကစားရောဂါ) ပေါ် အခြေခံ. မကြာသေးမီကအပြုအမူစွဲအဖြစ်ဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတူ DSM-5 အတွက် reclassified ခဲ့သည် . သို့သော်အခြားရောဂါများ (ဥပမာ, အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသောသူတို့အား, ဗီဒီယို-ဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်လိင်) ကြောင့်အခြေအနေများအပေါ်ကန့်သတ် data ကိုမှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာ, DSM-5 ၏အဓိကအပိုင်းများတွင်မပါဝင်ခဲ့ကြသည် ။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးတိုးတက်လာသော CSB ၏နားလည်မှုနှင့်ဘယ်လိုမှတူညီပြခြင်းငှါသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်ကနေကွဲပြားခြားနားမှုခွဲခြားအားထုတ်မှုနှင့်ပိုပြီးထိရောက်သောကာကွယ်တားဆီးရေး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကုသမှုအားထုတ်မှုနှင့်အတူကူညီလိမ့်မည်။ (ပျြောမှေ့စသို့မဟုတ်အကြိုးအပြုအမူတွေကိုကျော်ချို့ယွင်းထိန်းချုပ်ဥပမာ) ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှု, လောင်းကစားဝိုင်းနှင့် hypersexual မမှန်အကြားပေးသောတူညီ, CSB အတွက်စှဲ (ဥပမာ, cue reactivity ကို) ရမ်းတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှအဓိကဒြပ်စင်၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။
Cue reactivity ကိုပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်၏ဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်မှအရေးကြီးပြောပြတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြီးထွား cue reactivity ကို relapse နှင့်ဆက်စပ်နေသည် , . အရက်, နီကိုတင်းနှင့်ကိုကင်းအပါအဝင်အလွဲသုံးစားလုပ်၏ဝတ္ထုများကိုဖြတ်ပြီး cue reactivity ကိုအတွက်လေ့လာမှုများ၏မကြာသေးမီကအရေအတွက် Meta-analysis သည်အဆိုပါ ventral striatum, dorsal anterior cingulate (dACC) နှင့် amygdala အတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုမှထပ်လှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြ, dACC, pallidum နှင့် ventral striatum အတွက် Self-အစီရင်ခံ cue-သွေးဆောင်တဏှာမှလှုပ်ရှားမှုထပ်နှင့်အတူ ။ သို့သော်အတိုင်းအတာသောဤဒေသများနှင့် CSB လေ့လာခဲ့ရသေးခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက် differential ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-cue reactivity ကိုပြသခွေငျးငှါရန်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (ထိုကဲ့သို့သောအားကစားလှုပ်ရှားမှုများဗီဒီယိုများကဲ့သို့) စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်လိုသောနှင့် CSB နှင့်မပါဘဲဘာသာရပ်များအတွက်အကြိုက်၏အကဲဖြတ်ရမှတ်များနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကဗီဒီယိုတွေကိုနှိုင်းယှဉ် cue reactivity ကိုအကဲဖြတ်။ ကျနော်တို့ပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန် (အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးအလားတူ) like နှိပ်သော်လည်းမ Non-လိင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကိုမှမ (လိုသော) သာ. ကြီးမြတ်အလိုဆန္ဒပြပါလိမ့်မယ်မရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကြောင်းတွေးဆ။ ဒေသတစ်ခုအကွာအဝေးကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတုန့်ပြန်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီဖြစ်သော်လည်းကျွန်တော် CSB နှင့်အတူလူနာလေ့လာနေခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကျနော်တို့မူးယစ် cue ်ပတ်သက်နေဒေသများတွင် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမို activation ရှိလိမ့်မယ်လို့တွေးဆ အဆိုပါ ventral striatum, dACC နှင့် amygdala အပါအဝင် reactivity ကိုလေ့လာမှုများ။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်သည်ဤဒေသဆိုင်ရာ Active function မရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးနှင့်ဆက်စပ်ပေမယ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းတွေးဆခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ (ချင်) ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတွင်ဤဒေသများအတွင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်လိမ့်မယ်လို့ မပါဘဲရှိသူများ။ အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေကိုအခြေခံစိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုပေးထား , ငါတို့သည်လည်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးစူးစမ်း။
CSB ဘာသာရပ်များတွင်အင်တာနက်-based ကြော်ငြာများမှတဆင့်များနှင့်ကုသရာမှရည်ညွှန်းထံမှစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအရှေ့ Anglia ဧရိယာထဲမှာလူထုအခြေပြုကြော်ငြာကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ CSB အုပ်စု, စိစစ်ရေးကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည် အင်တာနက်ကိုလိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ် (ISST)  နှင့်စတင်ခြင်း၏အသက်, အကြိမ်ရေ, ကြာချိန်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်တခုတခုအပေါ်မှာကျယ်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး-ဒီဇိုင်းမေးခွန်းလွှာ, အသုံးပြုခြင်း, abstinence, အသုံးပြုခြင်း, ကုသမှုနှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များ၏ပုံစံများကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ CSB ဘာသာရပ်များသူတို့ CSB များအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံမပြည့်စုံအတည်ပြုဖို့စိတ်ရောဂါနဲ့မျက်နှာ-to-မျက်နှာအင်တာဗျူးခံယူ , ,  အတွက် (စားပွဲတင် S1 S1 file) အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း compulsive အသုံးပြုမှုကိုအာရုံစိုက်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကို Hypersexual Disorder များအတွက်အဆိုပြုအဖြေရှာတဲ့စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ,  နှင့်လိင်စွဲလမ်းများအတွက်သတ်မှတ်ချက်  အတွက် (စားပွဲတင် S1 S1 file).
ဒီဇိုင်းနှင့်တွေကို၏သဘောသဘာဝပေးသောအားဖြင့်, ခပ်သိမ်းသော CSB ဘာသာရပ်များနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းယောက်ျားနှင့်လိင်ကွဲခဲ့ကြသည်။ အထီးကျန်းကျန်းမာမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း CSB ဘာသာရပ်များနှင့်အတူအသက်-လိုက်ဖက် (အသက်၏ +/-5နှစ်) ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးအပိုဆောင်း 25 အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက်အထီးလိင်ကွဲကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုများကအကဲဖြတ်အဖြစ်ဗီဒီယိုများဖို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုများလုံလောက်မှုသေချာဖို့စကင်နာပြင်ပတွင်ဗီဒီယို ratings ခံယူ။ သီးသန့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်၊ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများရှိခြင်း၊ တရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးများကို (ဆေးခြောက်အပါအ ၀ င်) အသုံးပြုခြင်းနှင့်လက်ရှိအလယ်အလတ် - ပြင်းထန်သောအဓိကစိတ်ကျရောဂါအပါအ ၀ င်ပြင်းထန်သောစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ > 18) သို့မဟုတ် obsessive-compulsive ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြွရောဂါသို့မဟုတ် schizophrenia (Mini ကိုနိုင်ငံတကာအာရုံကြောအထူးကု Inventory) ၏သမိုင်း . အခွားသော compulsive သို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲကိုလည်းချန်လှပ်ခဲ့ကြ. ဘာသာရပ်များအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားသို့မဟုတ်လူမှုရေးမီဒီယာ, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ် compulsive စျေးဝယ်, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုအာရုံစိုကျလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါနှင့်မူးရူး-အစာစားခြင်းရောဂါရောဂါ၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းတဲ့စိတ်ရောဂါများကအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များလည်း MRI ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူလိုက်ဖက်မှုအတှကျအပြခံခဲ့ရသည်။
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ခေါ်ဆောင်သွား non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ငွေကြေးနှင့်ကြားနေ: အပုံရိပ်တာဝန်များတွင်ဘာသာရပ်များ5အခြေအနေများ၏တဦးတည်းအနေဖြင့်တစ်ဦးတန်ပြန်မျှမျှတတဖက်ရှင်အတွက်တင်ပြဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများရှုမြင်ကြသည်။ အဆိုပါဗီဒီယိုများဗီဒီယိုအိမ်တွင်းသို့မဟုတ်အိမ်ပြင်ခဲ့လျှင်မေးခွန်းတစ်ခုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်9စက္ကန့်, အဘို့အပြခံခဲ့ရသည်။ ဘာသာရပ်များသူတို့အာရုံကိုပေးဆောင်ခဲ့ကြစေရန်မိမိတို့၏လက်ျာဘက်၌မိမိတို့ဒုတိယနှင့်တတိယဂဏန်းနဲ့ 2-button ကိုသော့ချက်-Pad အသုံးပြု. တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ မေးခွန်း 2000 မီလီစက္ကန်မှ 4000 တစ် Jitter အချင်းချင်းရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလအတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အကဲဆတ်သောဗီဒီယိုများဘယ်မှာလိုအပ်သောရရှိသောလိုင်စင်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်ဗီဒီယိုများမှရရှိသောကာလူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြားကြည်ကြည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကပြသခဲ့သည်။ ခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုများဥပမာခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဝတ်ဆင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကခုန်သို့မဟုတ်သူမ၏ပေါင်နိန်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အမြင်ကွင်းတစ်ခုပါဝင်သည်။ non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဗီဒီယိုများအလွန်အမင်းထိုကဲ့သို့သောနှင်းလျှောစီး, ကောင်းကင်ပြာ-ရေငုပ်, ကျောက်တောင်တက်, ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ကယ်-စီးနင်းအဖြစ်နိုင်ငံတကာကိုထိခိုက်ရုပ်ပုံစနစ်ကနေပုံရိပ်တွေကိုနှိုးဆွသောရန်သဘာဝအလားတူအားကစားဗီဒီယိုများပြသ။ ပိုက်ဆံဗီဒီယိုများ, ဒင်္ဂါးပြားသို့မဟုတ် paid ခံစက္ကူပိုက်ဆံပုံရိပ်တွေပြသကျသွားသို့မဟုတ်အရပ်ရပ်ကွဲပြားကြ၏။ ကြားနေဗီဒီယိုများရှုခင်းများ၏မြင်ကွင်းများပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါအခြေအနေများ 40 ဗီဒီယိုတစ်ဦးစုစုပေါင်းပြသခွအေနအေနှုန်းရှစ်စမ်းသပ်မှုတွေ randomized ခဲ့ကြသည်။ အခွအေနေနှုန်းငါးကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုများစုစုပေါင်းပြသခဲ့ကြသည် 25 ကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယို။
အဆိုပါ fMRI လေ့လာမှုများ၏ဝယ်ယူ parameters များကိုဖော်ပြထားပါသည် S1 file။ ၉- စက္ကန့်ဗီဒီယိုကလစ်ပ်များနှင့်စမ်းသပ်မှုကြားကာလများကိုသေတ္တာ - ကား၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဟီမိုဒိုင်းနမစ်တုံ့ပြန်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းယေဘုယျ linear မော်ဒယ်ကိုအသုံးပြု။ ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဗီဒီယိုအခြေအနေများအတွင်း - ဘာသာရပ်များအချက်အဖြစ်အကြားဘာသာရပ်များအချက်နှင့်အခွအေနေ (ဗီဒီယိုအမျိုးအစား) အဖြစ်အုပ်စု (CSB, Non-CSB) နှင့်အတူ ANOVA ကိုအသုံးပြု။ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအခြေအနေများအနှံ့အုပ်စုတစ်စု၏အဓိကသက်ရောက်မှုကိုပထမ ဦး ဆုံးနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ အခြေအနေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေ၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအားကစားဗီဒီယိုများကိုရှင်းလင်းပြတ်သားသောနှင့်ခေါ်ဆောင်သွားသောအခြေအနေများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မြေတပြင်လုံး - ဦး နှောက်မိသားစုပညာအမှား (FWE) အထက် activations, P <9 အဓိကသက်ရောက်မှုနှိုင်းယှဉ်အတွက်သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်တညျ့။ အုပ်စုလိုက်အနေဖြင့် (ဥပမာ CSB (ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်) - ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း (ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်) အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများ တစ်ဦး အကယ်၍ အခြေအနေတစ်ခု၏ဆန့်ကျင်ဘက် (ဥပမာ - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော) ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်ဒေသများသည် ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး FWE P <0.05 အဆင့်တွင်သိသာထင်ရှားသောဒေသများရှိပါကအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်။ အသက်အရွယ်နှင့်စိတ်ကျရောဂါရမှတ် covariates အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အတိုင်းအတာများနှင့်ဗီဒီယိုတွေကိုမှတုံ့ပြန်မှု like နှိပ်ခြင်း, Young ကအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းအပေါ်ရမှတ်များနှင့် abstinent ရက်ပေါင်းအကျိုးစီးပွား covariates အဖြစ်မော်ဒယ်များတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်အပါအဝင် Variables ကို။ အသက်အရွယ်၏ covariate လည်းအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီး, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အလိုဆန္ဒအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ထား, စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကဲဆတ်သောဖုံးအုပ်ကိုအသုံးပြုပြီးခဲ့သည်။
အဆိုပါ ventral striatum, amygdala နှင့် dorsal cingulate အကျိုးစီးပွားဒေသများတွေးဆခဲ့ကြသည်။ ခိုင်ခံ့နှင့်အတူဤသုံးပါးဒေသများများအတွက် တစ်ဦး ယူဆချက်ကျနော်တို့ p <0.05 သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမိသားစု - ပညာရှိ - အမှားဆုံးမခြင်းနှင့်အတူသေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ် - ဆုံးမခြင်း (SVC) ကိုအသုံးပြု။ ROIs ပေါင်းစပ်။ dorsal anterior cingulate ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေလိုသောအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်သောရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များအရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာအပြန်အလှန်လေ့လာမှုကို dorsal cingulate (မျိုးစေ့ဒေသ) (သြဒီနိတ် xyz = ၀.၈ ၃၈ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၀ = ၁၀ မီလီမီတာ) နှင့်ရှင်းလင်းပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဗီဒီယိုများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ mesolimbic နှင့် mesocortical circuit များတွင်ပါ ၀ င်မှုအလားအလာရှိသောကြောင့် sustia nigra တွင်လုပ်ဆောင်မှုကိုရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေမှုအဆင့်တွင်သာလေ့လာခဲ့သည်။ ယခင်ကအခြားလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုသောအကျိုးစီးပွား၏ ventral striatal ခန္ဓာဗေဒဒေသ (ROI) လက် Martinez et al အားဖြင့် ventral striatum ရဲ့အဓိပ်ပါယျကိုအောက်ပါ MRIcro အတွက်ရေးဆွဲခဲ့သညျ။ ။ cingulate နှင့် amygdala များအတွက် ROIs WFUPickAtlas SPM Toolbox ကိုအတွက် aal တင်းပလိတ်များထံမှရရှိသောခဲ့ကြသည် ။ အဆိုပါ substantia nigra ရွယ်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောတင်းပလိတ်များဟာ WFUPickAtlas template ကိုနှင့် 17 ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကနေသံလိုက်လွှဲပြောင်းပာသုံးပြီး MRIcro အတွက်လက်ရေးဆွဲရွယ်အပါအဝင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အားလုံးပုံရိပ် data တွေကို Pre-လုပ်ငန်းများ၌တို့ SPM 8 (NeuroImaging, လန်ဒန်အဘို့အ Wellcome Trust မှစင်တာ, ဗြိတိန်) ကို အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
ကိုး CSB (အသက် 25.61 (SD က 4.77) နှစ်) နဲ့လိင်ကွဲယောက်ျားနဲ့ 19 အသက်အရွယ်-လိုက်ဖက် (အသက် 23.17 (SD က 5.38) နှစ်) CSB မပါဘဲလိင်ကွဲအထီးကျန်းကျန်းမာမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလေ့လာခဲ့ကြ အတွက် (စားပွဲတင် S2 S1 file) ။ အလားတူအသက်တစ်ခုအပိုဆောင်း 25 (25.33 (SD က 5.94) နှစ်) အထီးလိင်ကွဲကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းဗီဒီယိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ CSB ဘာသာရပ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်သူတို့အလုပ်မှာသုံးစွဲဖို့မှုကြောင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် (N ကို = 2), ရငျးနှီးဆက်ဆံရေးပျက်စီးသို့မဟုတ်အဆိုးအခြားလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများသြဇာလွှမ်းမိုးမှု (N ကို = 16) မိန်းမနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအတွက်အထူးလျော့နည်းသွားလိင်စိတ်သို့မဟုတ် erectile function ကိုကြုံတွေ့ (ပေမယ့်မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှဆက်ဆံရေးအတွက်) (N ကို = 11), စောင့်အရှောက်အလွန်အကျွံ (N ကို = 3) သုံး2သတ်သေ ideation (N ကို =3တွေ့ကြုံ) နှင့်ပိုက်ဆံပမာဏကို အသုံးပြု. (N ကို =; £ 7000 ကနေ£ 15000 မှ) ။ ဆယ်ပါးဘာသာရပ်များဖြစ်စေခဲ့သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အပြုအမူများအတွက်အကြံပေးခြင်းရှိကြ၏။ အားလုံးဘာသာရပ်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၏မြင်ကွင်းနှင့်အတူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်များတွင်လည်းအစောင့်အကြပ်န်ဆောင်မှုများ (N ကို = 4) နှင့်ဘာ၏အသုံးပြုမှုကို (N ကို = 5) ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါအရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများစကေးတစ်ခုအဆင်ပြေအောင်ဗားရှင်းတွင် , ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် CSB ဘာသာရပ်များလိင်စိတ်နိုးထနှင့်အတူသိသိသာသာပိုပြီးအခက်အခဲရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွင်ပိုမို erectile အခက်အခဲများကြုံတွေ့ပေမယ့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း sexually ဖို့မ (စားပွဲတင် S3 အတွက် S1 file).
ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSB ဘာသာရပ်များပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အစောပိုင်းကအသက်အရွယ်မှာလိင်အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများကြည့်ရှုအားပေး (HV: 17.15 (SD က 4.74); CSB: 13.89 (SD က 2.22) နှစ်အတွက်) ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်မှဆွေမျိုး (HV: 12.94 (SD က 2.65); CSB: 12.00 (SD က 2.45) နှစ်အတွင်း) ( အုပ်စုတစ်စု-by-စတင်ခြင်းအပြန်အလှန်: F (1,36) = 4.13, p = 0.048) ။ CSB ဘာသာရပ်များကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းပိုမိုတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုဆွေမျိုး (စားပွဲတင် S3 ခဲ့ S1 file). အရေးကြီးတာက, CSB ဘာသာရပ်များကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက် 25.49% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလိင်ကအွန်လိုင်း (ပျမ်းမျှ 8.72 (SD က 3.56) နှစ်များအတွက်) စုစုပေါင်းအွန်လိုင်းအသုံးပြုမှု 4.49% အဘို့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းကြည့်ရှုဘို့အင်တာနက်ကို အသုံးပြု. သတင်းပို့ (t = 5.311, p <0.0001) (CSB နှင့် HV: လိင်ဆိုင်ရာအတိအလင်းပစ္စည်းအသုံးပြုမှု - ၁၃.၂၁ (SD ၉.၈၅) vs. ၁.၇၅ (SD ၃.၃၆) တစ်ပတ်လျှင်နာရီ၊ စုစုပေါင်းအင်တာနက်အသုံးပြုမှု - ၃၇.၀၃ (SD ၁၇.၆၅) နှင့် ၂၆.၁၀ (၁၈.၄၀) တစ်ပတ်ကိုနာရီ) ။
ဗီဒီယိုများအလိုဆန္ဒနှင့်အကြိုက်၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့-by-rating-type အမျိုးအစား-by-ဗီဒီယိုအမျိုးအစားအပြန်အလှန်ရှိခဲ့သည့်အတွက် dissociated ခဲ့ကြသည် (က F (1,30) = 4.794, p = 0.037): ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဗီဒီယိုများအလိုဆန္ဒ ratings ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် CSB အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြ (က F = 5.088, p = 0.032) သော်လည်းမခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုမှ (F ကို = 0.448, p = 0.509), ခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုမှ ratings like နှိပ်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် CSB အတွက် သာ. ကြီးမြတ်ခဲ့ကြသော်လည်း (က F = 4.351, p = 0.047) ဒါပေမယ့်မရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုမှ (က F = 3.332, p = 0.079) ။ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုရန်အလိုဆန္ဒနှင့်အကြိုက်ရမှတ်များသိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည် (HV: R ကို2 = 0.696, p <0.0001; CSB: R2 = 0.363, p = 0.017) အဆိုပါ linear ဆုတ်ယုတ်အုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် (က F = 2.513, p = 0.121) ။ အဲဒီမှာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအကြားတစ်ဦးချင်းစီအခွအေနေအဘို့အလိုဆန္ဒနှင့်အကြိုက်များအတွက်ဗီဒီယို-rating ရမှတ်များမကွဲပြားမှုလည်းဖြစ်ကြသည်နှင့်ဗီဒီယိုများဖို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings အကြံပြုထားတဲ့အပိုဆောင်း 25 ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကိုယ်စားလှယ်ခဲ့ကြသည် (p ရဲ့> 0.05) ။ ဘာသာရပ်အားလုံးကလေ့လာမှုမတိုင်မီကဗွီဒီယိုများကိုသူတို့မတွေ့ဖူးကြောင်းတင်ပြကြသည်။
ပုံ 1 ။ အခွအေနေခြားနားနေသည်။
ဖန်သားပြင် ဦး နှောက်နှင့် coronal ပုံများသည်အောက်ပါကွဲပြားခြားနားသည့်အုပ်စုများအပေါ်တွင်သက်ရောက်မှုများကိုပြသသည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် (ဘယ်ဘက်၊ ထိပ်တန်း)၊ ခေါ်ဆောင်သွားသော - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် (အလယ်၊ အလယ်တန်း) နှင့်ငွေ - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် (ညာ၊ အောက်ခြေတန်း) ပုံများတလုံးလုံး ဦး နှောက် FWE- တညျ့ P ကို ​​<0.05 မှာပြသလျက်ရှိသည်။ axial မြင်ကွင်း (ညာဘက်အပေါ်) သည်သိသာထင်ရှားသည့်အုပ်စုများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အားပြသခြင်းအားဖြင့် sustia nigra အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ပုံကို magnetization transfer sequence တွင်ထည့်ထားသော interest mask ၏စိတ်ဝင်စားမှုမျက်နှာဖုံးနှင့်ပြထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေးဆဒေသများတွင်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆနျ့ကငျြဘ - ကျနော်တို့ဘေးကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအတွက်အကြား-အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ CSB ဘာသာရပ်များညာဘက် ventral striatum (အထွတ်အထိပ် voxel XYZ မီလီမီတာအတွက် = 182-2, Z ကို = 3.47, FWE p = 0.032), dACC (0 8 38, Z ကို = 3.88, FWE p = 0.020) နှင့်ညာဘက် amygdala အတွက် သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုသရုပ်ပြ (32 -8 -12, Z ကို = 3.38, FWE p = 0.018) (ပုံ 2). cue reactivity ကိုအတွက် dopaminergic circuitry များအတွက်အခန်းကဏ္ဍပေးထားကျနော်တို့ကိုလည်း substantia nigra အတွက်လှုပ်ရှားမှုစူးစမ်း။ CSB ဘာသာရပ်များညာဘက် substantia nigra အတွက် သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှုရှိခဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆနျ့ကငျြဘ - ကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအတွက် (10 -18 -10, Z ကို = 3.01, FWE p = 0.045) ။ စိတ်မကျဆေး Antidepressants အပေါ်သူနှစ်ဦးကိုဘာသာရပ်များဖယ်ထုတ်ပြီးတစ်ဦးကခွဲဆန်းစစ်သိသာတွေ့ရှိချက်မပြောင်းခဲ့ပါဘူး။
ပုံ2။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ။
အဆိုပါ coronal အမြင်များအတိအလင်း> စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချက်များဆန့်ကျင်ဘက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB)> ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (HV) နှင့်အတူဘာသာရပ်များ၏အုပ်စု -video ဗီဒီယိုအမျိုးအစားအပြန်အလှန်ကိုယ်စားပြုသည်။ ပုံများကို P <0.005 မှာအကျိုးစီးပွားဒေသများအဖြစ်ပြသလျက်ရှိသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာသည့်အချိန်သည်အနီရောင်နှင့်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများရှိ CSB ဘာသာရပ်များနှင့်အတူရှင်းလင်းပြတ်သားသောဗီဒီယိုများ (ထိပ်) နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဗီဒီယိုများ (အောက်ခြေ) သို့% signal ပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အမှားဘား SEM ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ပုံ3။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ။
A. ပုဂ္ဂလဒိdesire္ဆန္ဒနှင့်ရမှတ်များကိုအတင်းအကျပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (CSB) နှင့်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း (HV) သင်တန်းသားများရှိဗီဒီယိုအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်အုပ်စုလိုက်မှဗီဒီယိုအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအလိုဆန္ဒ / အကြိုက်များရှိသည်။ အမှားဘား SEM ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ * p <0.05 ။ dorsal cingulate parameter သည်ခန့်မှန်းချက် (PE) နှင့်အလိုဆန္ဒရမှတ်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဂရပ်နှင့်အတူနှစ် ဦး စလုံး CSB နှင့် HV ဘာသာရပ်များအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဗီဒီယိုများများအတွက် B. Desire covariate ။ dorsal cingulate အမျိုးအနွယ်နှင့်အတူရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ - စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆနျ့ကငျြဘအဘို့အလိုဆန္ဒ covariate နှင့်အတူ C. Psychophysiological အပြန်အလှန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ coronal ပုံများနှင့်ဂရပ်များက CSB ဘာသာရပ်များကို HV သီးသန့်မျက်နှာဖုံးနှင့်ပြသပြီး ventral striatum နှင့် amygdala parameter ခန့်မှန်းချက်နှင့်အလိုဆန္ဒရမှတ်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပြသည်။ ပုံများကို P <0.005 မှာအကျိုးစီးပွားဒေသများအဖြစ်ပြသလျက်ရှိသည်။
ပုံ4။ ခေတ်။
Coronal အမြင်သည်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း (HV) သီးသန့်မျက်နှာဖုံးပါ ၀ င်သည့် Compulsive Sex Behaviour (CSB) ရှိဘာသာရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဗွီဒီယိုများအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားမှုကိုပြသသည်။ ဇယားသည်နှစ်နှင့်ချီ။ ventral striatal parameter ခန့်မှန်းချက် (PE) နှင့်သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ regression analysis အားပြသသည်။ ပုံကို P <0.005 တွင်အကျိုးစီးပွားဒေသအဖြစ်ပြသသည်။
ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSB ဘာသာရပ်များ သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိခဲ့သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုလိုသောနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုပိုမိုအကြိုက်ရမှတ်ခဲ့, အရှင်လိုသောနဲ့အကြိုက်အကြားတစ်ဦး dissociation ဆန္ဒပြနေသော။ CSB ဘာသာရပ်များလည်းရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအတွက်လိင်စိတ်နိုးထနှင့် erectile အခက်အခဲများပိုမိုချို့ယွင်းခဲ့ပေမယ့်မပေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက်မြှင့်တင်ရန်ဆန္ဒရမှတ်အဆိုပါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကိုမှတိကျသောခဲ့ကြသည်နှင့်အမြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒယေဘူယျမဟုတ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြနှင့်အတူ။ CSB ဘာသာရပ်များတွင်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒများကိုပိုမိုသိသာထင်ရှားသည့်အချက်များနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော dACC လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) dACC, ventral striatum နှင့် amgydala တို့အကြားပိုမိုထိရောက်သောဆက်သွယ်မှုများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဆက်စပ်သောလိုသော။ လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည့်ပစ္စည်းများကိုအတင်းအကျပ်အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများပါ ၀ င်နိုင်သည့်ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ dopamine agonists များနှင့်ဆက်စပ်သော compulsive hypersexuality လေ့လာမှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်နွှယ်သောလိင်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုပိုမိုအာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ . အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက် CSB အာရုံစိုက်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အလားတူမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီမူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue ဆီသို့ဦးတည်ပေမယ့်မရ '' အကြိုက် 'သို့မဟုတ် hedonic သေံ၏ထစ်အငေါ့လိုသောသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုအလေးပေးနှင့်အတူ dovetail .
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူ correlating CSB ဘာသာရပ်များအတွက် P300 အပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုမှတူညီရှိစေခြင်းငှါအရာ, dACC လှုပ်ရှားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထင်ဟပ်အကြံပြု . ဒီယခင်လေ့လာမှုတစ်ခုထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသော်လည်းကျနော်တို့ CSB အုပ်စုတစ်စုနှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအကြားခြားနားချက်များကိုပြ။ CSB အတွက်ယခင်မြေားကိုပျံ့နှံ့ MRI နှင့် P300 အာရုံစိုက်နှင့်အတူဤလက်ရှိလေ့လာမှု၏နှိုင်းယှဉ်အတိုင်းအတာများကွဲပြားမှုပေးထားခက်ခဲသည်။ အဆိုပါ P300 ၏လေ့လာမှုများ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်အတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုကိုလေ့လာဖို့အသုံးပြုဖြစ်ရပ်တစ်ခု related အလားအလာ, နီကိုတင်း၏အသုံးပြုမှုကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူပြပွဲမြင့်မားသောအစီအမံများ , အရက် နှင့် opiates , အစီအမံများမကြာခဏတဏှာညွှန်းကိန်းနှင့်အတူ correlating အတူ။ အဆိုပါ P300 လည်းလေ့အနိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေပစ်မှတ်မကြာခဏ High-ဖြစ်နိုင်ခြေ Non-ပစ်မှတ်နှင့်အတူရောနှောထားတဲ့အတွက် oddball တာဝန်များကိုသုံးပြီးပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်လေ့လာခဲ့သည်။ Meta-analysis သည်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှု-disorders ဘာသာရပ်များနှင့်၎င်းတို့၏ထိခိုက်မိသားစုဝင်များကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် P300 လွှဲခွင်လျော့နည်းသွားခဲ့ကြောင်းပြသ ။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာပြtaskနာများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာဂရုပြုမှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအာရုံစိုက်စေပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် (မူးယစ်ဆေးမဟုတ်သောပစ်မှတ်များ) သို့အာရုံစူးစိုက်မှုအရင်းအမြစ်များချို့တဲ့ခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်နိုင်သည်။ P300 လွှဲခွင်များကျဆင်းခြင်းသည်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုမမှန်မှုများအတွက် endophenotypic marker လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုကာကိုလာနှင့်ဘိန်းဖြူအချက်များ၏လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုအာရုံစိုက်သည့်အဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလားအလာများကိုလေ့လာခြင်းသည် ERP ၏အစိတ်အပိုင်းများတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ရပ်များကိုထပ်မံတင်ပြသည် (မီလီစက္ကန့် ၃၀၀; နောက်ကျသည့်အလားအလာ၊ LPP) တိုကျရိုကျဒေသမြားတှငျလညျးတငျပွမှုနှငျ့အာရုံစူးစိုက်မှုတိုကျရိုကျ -။ အဆိုပါ LPP နှစ်ဦးစလုံးအစောပိုင်းအာရုံကိုဖမ်းယူထင်ဟပ်ယုံကြည် (400 msec 1000 မှ) နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် motivationally သိသိသာသာလှုံ့ဆော်မှုရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်နေသည်။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူဘာသာရပ်များသာယာသောစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှ attenuation တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူလှုံ့ဆော်အာရုံစိုက်မှုများ၏အစောပိုင်းအာရုံကိုဖမ်းများအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်းကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်အစောပိုင်း LPP အစီအမံတိုးမြှင်ခဲ့သည်။ သို့သော်နှောင်းပိုင်း LPP အတိုင်းအတာသိသိသာသာကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရှိသူတို့ထံမှကွဲပြားခြားနားသောမ ။ ပစ်မှတ်-related တုံ့ပြန်မှုများအတွက် P300 ဖြစ်ရပ်-related အလားအလာများ၏မီးစက်အဆိုပါ parietal cortex နဲ့ cingulate ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည် . ထို့ကြောင့်ယခင် CSB လေ့လာမှုကဖော်ပြခဲ့သည်ပစ္စုပ္ပန် CSB လေ့လာမှုနှင့် P300 လှုပ်ရှားမှုအတွက်နှစ်ဦးစလုံး dACC လှုပ်ရှားမှုအာရုံကိုဖမ်းအလားတူနောက်ခံဖြစ်စဉ်များကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။ အလားတူပင်နှစ်ဦးစလုံးလေ့လာမှုများတိုးမြှင်အလိုဆန္ဒနှင့်အတူဤအအစီအမံများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုကိုပြ။ ဤတွင်ကျနော်တို့ dACC လှုပ်ရှားမှုတဏှာ၏အညွှန်းကိန်းကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအရာ, အလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်, ဒါပေမယ့်စွဲလမ်းတစ်ခုမက်လုံးပေး-salience မော်ဒယ်ပေါ်ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များ like နှိပ်နှင့်အတူမပတျသကျဘူးကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
လက်ရှိတွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်အသက်အရွယ်-related လွှမ်းမိုးမှုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်နံရံပစ်ကစားနည်း-cortical မီးခိုးရောင်ကိစ္စ၏ရင့်ကျက်အလယ်ပိုင်း 20 ့သို့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဆက်ရှိနေသေး ။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက်တာ Enhanced အန္တရာယ်စောင့်ကြည့်ရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်တိုကျရိုကျအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များသို့မဟုတ်ဟန့်တားအပြုအမူတွေကိုပိုပြီးနှောင့်နှေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် limbic မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ဆုလာဘ် circuitry ဆွေမျိုးများ၏အစောပိုင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည် , , ။ ဥပမာ, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်နှိုင်းယှဉ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း cortical လှုပ်ရှားမှု prefrontal ပိုမို ventral striatal လှုပ်ရှားမှုဆွေမျိုးသရုပ်ပြပါပြီ . ဤတွင်ကျနော်တို့ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး, ငယ်ရွယ်စဉ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေကို sexually ပိုမို ventral striatal လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းစောငျ့ရှောကျ။ ventral striatal လှုပ်ရှားမှု၌ဤအကျိုးသက်ရောက်အထူးယေဘုယျနှင့် CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အသက်အလားအလာ modulatory အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, CSB ဘာသာရပ်များအတွက်အထူးသဖြင့်ကြံ့ခိုင်ပုံပေါ်ပါတယ်။
ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု activated ဒေသများမှကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်စာပေနှင့်အတူစောင့်ရှောက်ခြင်းတှငျကြှနျုပျတို့ ventral, အ occipito-ယာယီနှင့် parietal cortical, insula, cingulate နှင့် orbitofrontal နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortical, Pre-အလယ်ပိုင်း gyrus, caudate အပါအဝင်အလားတူကွန်ယက်ကိုပြသ striatum, pallidum, amygdala, substantia nigra နှင့် hypothalamus -. ကျန်းမာယောက်ျားတွင်အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုပိုရှည်ကြာချိန် desensitization တစ်အလားအလာအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်းနေဆဲရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံရိပ်တွေရှင်းလင်းဖို့အောက်ပိုင်းလက်ဝဲ putaminal လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူပတျသကျပြထားပြီး . ဆနျ့ကငျြ, ဒီလက်ရှိလေ့လာမှုအနှုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်နှင့်အတူအခက်အခဲအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ CSB နဲ့ရောဂါဗေဒအဖွဲ့ကိုအာရုံစိုက်။ ထို့အပွငျ, ဒီလက်ရှိလေ့လာမှုအကျဉ်းနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုမှနှိုင်းယှဉ်ပါကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းခုနှစ်တွင်, ဗီဒီယိုကလစ်ပ်နှိုင်းယှဉ်ခေါ်ဆောင်သွားနေဆဲပုံရိပ်တွေ၏ကြည့်ရှု hippocampus, amygdala နှင့် posterior ယာယီနှင့် parietal cortical အပါအဝင်တစ်ဦးထက်ပိုသောကန့်သတ် activation ပုံစံရှိပါတယ်  အကျဉ်းချုပ်ကိုနေဆဲပုံရိပ်တွေနဲ့ဒီလက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုကြာကြာဗီဒီယိုများအကြားဖြစ်နိုင်ခြေအာရုံကြောကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုခြင်း. ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောကင်းအသုံးပြုမှုမမှန်အဖြစ်စွဲလမ်းပုံမမှန်လည်းအပန်းဖြေကင်းအသုံးပြုသူများကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုမြှင့်တင်ရန်ရှိသည်ဟုပြကြပြီမဟုတ်သော်လည်းတိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြသပြီ  sမှီခိုအသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်အပန်းဖြေအကြားအလားအလာကွဲပြားခြားနားမှု uggesting. ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, လေ့လာမှုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုလူဦးရေသို့မဟုတ် task ထဲမှာကွဲပြားခြားနားမှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအွန်လိုင်းပစ္စည်းများမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအွန်လိုင်းပစ္စည်းများမိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများကဖြစ်ပေမယ့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်အသင်းအဖွဲ့များ၏ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲစခွေငျးငှါအဘယ်သူသည်ကျန်းကျန်းမာမာတစ်ဦးချင်းစီမှနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူဘာသာရပ်များအကြားကွဲပြားစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုအများအပြားန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာ လေ့လာမှုသာလိင်ကွဲအထီးဘာသာရပ်များပါဝင်ပတ်သက်နှင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများစိတ်ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူမိန်းကလေးငယ် CSB မြင့်မားမှုနှုန်းပြစေခြင်းငှါ, အထူးသဖြင့်အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းစီဆနျးစစျသငျ့တယျ ။ လေ့လာမှုမှာ CSB ဘာသာရပ်များအတွက်ယာယီအဖြေရှာတဲ့စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမျိုးစုံအတည်ပြုအကြေးခွံကိုအသုံးပြုပြီးလိင်နှင့်စပ်လျဉ်း functional ဖြစ်စေချွတ်ယွင်းသရုပ်ပြပေမယ့်ဒုတိယ, လက်ရှိ CSB အဘို့အဘယ်သူမျှမပုံမှန်ရောဂါရှာဖွေစံရှိမတည်ရှိခြင်းနှင့်ဤတွေ့ရှိချက်ကိုနားလည်နှင့်ပိုကြီးတဲ့အတွင်းသူတို့ကိုအားမရများအတွက်န့်အသတ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ် စာပေ။ တတိယအဆိုပါလေ့လာမှု၏ Cross-Section သဘာဝပေးသော, ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကြောင်းကိုအခြလုပ်မရပါ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြော activation ဖြစ်နိုင်သည်ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းပိုမိုထိတွေ့မှုကလွှမ်းမိုးတိုးမြှင့်အားနည်းချက်သို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုရှိမရှိကိုညွှန်းအလားအလာအန္တရာယ်အချက်များ, CSB အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပုံစံများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်ကိုယ်စားပြုရသောမှအတိုင်းအတာဆနျးစစျသငျ့သညျ။ တစ်ဦးအလားအလာသဘောသဘာဝသို့မဟုတ်ထိခိုက်မိသားစုဝင်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သူများထပ်မံလေ့လာမှုများမျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်။ လေ့လာမှုအတွက်ကန့်သတ်အသက်အပိုင်းအခြားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတွေ့ရှိချက်များကန့်သတ်ရန်လိမ့်မည်။ စတုတ္ထ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုဆက်စပ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူအွန်လိုင်းပစ္စည်းများ compulsive အသုံးပြုမှုအပေါ်လွှမ်းမိုးအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းမကြာခဏအစောင့်အကြပ်န်ဆောင်မှုများကျဘာသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုပါ။ ဤအဘာသာရပ်များသူတို့အပြည့်အဝကုသမှု setting တွင်ဘာသာရပ်များကိုယ်စားပြုခြင်းရှိမရှိ, အွန်လိုင်းကြော်ငြာများနှင့်ကုသမှု settings ကိုနှစ်ဦးစလုံးထံမှစုဆောင်းခဲ့ကြသည်အဖြစ်လျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ hypersexual ရောဂါ၏ရောဂါများအတွက် DSM-207 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးများတွင်အသုံးပြု5ကုသမှု-ရှာကြံ CSB ဘာသာရပ်များ၏လေ့လာမှုတစ်ခုအလားတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (81.1%), တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (78.3%), ဘာ (18.1%) နှင့်လိင်ဖြစ်ခြင်းအများဆုံးမကြာခဏအပြုအမူတွေမှတ်ချက်ပြု ဖှလူကြီးများ (44.9%) နှင့်အတူ  ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဦးရေနှင့်ဤအစီရင်ခံဘာသာရပ်တွင်လူဦးရေအကြားတူညီအကြံပြုခြင်း။ သို့သော်လူဦးရေရှာသောကုသမှုကိုအာရုံစိုက်လေ့လာမှုများလက္ခဏာတွေပိုမိုပြင်းထန်မှုရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အကျိုးစီးပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထက်ပိုပြီးတပြင်လုံးကိုဦးနှောက်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဒေသကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အသေးစားနမူနာများနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကဦးနှောက်ကိုဆုံးချဉ်းကပ်မှုမရှိခြင်းတစ်ကန့်သတ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ခိုင်မာတဲ့ပေးထား တစ်ဦး cue reactivity ကိုလေ့လာမှုများအနေဖြင့်ရရှိနိုင် Meta-သရုပ်ခွဲဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးယူဆချက်, ငါတို့သည်လေ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးပြုထားတဲ့ချဉ်းကပ်နည်းမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့အတညျ့အတိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမိသားစုပညာရှိသအမှားတစ်ခုဒေသခံစားခဲ့ရ တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။
S1 File ။
ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း: VV ။ VV TBM PB LP သို့ SM TRL JK MI: အစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: VV TBM PB LP သို့ LM သည် SM TRL JK nah MNP MI ။ VV TBM PB LP သို့ LM သည် SM TRL JK nah MNP MI: စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
1 ။ Fong သည် TW (2006) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုနားလည်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု (Edgmont) 3: 51-58 ။
2 ။ တစ်ကောလိပ်နမူနာအတွက် Odlaug BL, Grant က je (2010) Impulse-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမင်နီဆိုတာ Impulse Disorders အင်တာဗျူး (MIDI) မှရလဒ်များကို။ Prim စောင့်ရှောက်အဖော် J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 12 ။ Doi: 10.4088 / pcc.09m00842whi
3 ။ Odlaug BL, တဏှာ K ကို Schreiber LR, Christenson, G, Derbyshire K သည်, et al ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် (2013) compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 25: 193-200 ။
4 ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအတွက် je, Levine L ကိုကင်မ်: D, Potenza MN (2005) Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်ပေးသနား။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 162: 2184-2188 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.162.11.2184
5 ။ hypersexual ရောဂါအပေါ်ရိဒ် RC (2013) မိမိကိုယ်ကိုအမြင်များ။ လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive 20: 14 ။ Doi: 10.1080 / 10720160701480204
6 ။ Kafka အမတ် (2010) Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်အဆိုပြုရောဂါ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 39: 377-400 ။ Doi: 10.1007 / s10508-009-9574-7
7 ။ Kor တစ်ဦးက, Fogel က Y, ရိဒ် RC, Potenza MN (2013) Hypersexual Disorder တစ်ခုစွဲအဖြစ်ခွဲခြားခံရသငျ့သလော လိင်စွဲ compulsive 20 ။
၉။ Petry NM၊ O'Brien CP (9) အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် DSM-2013 ။ စွဲ 5: 108-1186 ။ Doi: 1187 / add.10.1111
10 ။ Childress AR, Hole AV စနစ်, Ehrman RN, Robbins SJ, McLellan ကို AT, et al ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုအတွက် (1993) Cue reactivity ကိုနှင့် cue reactivity ကိုကြားဝင်။ NIDA Res Monogr 137: 73-95 ။ Doi: 10.1037 / e495912006-006
၁၁။ Kuhn S၊ Gallinat J (၂၀၁၁) တရားဝင်နှင့်တရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတွန်းအားပေးခြင်း၏ပုံမှန်ဇီဝဗေဒ - cue-reactivity ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုကို meta-analysis လုပ်ခြင်း။ Eur J ကို Neurosci 11: 2011-33 ။ Doi: 1318 / j.1326-10.1111.x
12 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC (2008) ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံးပေးာင်းသီအိုရီ: အချို့သောလက်ရှိပြဿနာများကို။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc Lond B ကို Biol သိပ္ပံ 363: 3137-3146 ။ Doi: 10.1098 / rstb.2008.0093
13 ။ Kuhn က S, Gallinat J ကို (2011) cue-သွေးဆောင်အထီးလိင်စိတ်နိုးထအပေါ်တစ်ဦးကအရေအတွက် Meta-analysis သည်။ J ကိုလိင် Med 8: 2269-2275 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2011.02322.x
14 ။ Mouras H ကို, Stoleru ကို S, Bittoun J ကို, Glutron: D, Pelegrini-Issac M က, et al ။ ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားများတွင်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ (2003) ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Neuroimage 20: 855-869 ။ Doi: 10.1016 / s1053-8119 (03) 00408-7
15 ။ Arnow BA, Desmond je, Banner ll, ဂလိုဗာ GH, ရှောလမုန်တစ်ဦးက, et al ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲအထီးအတွက် (2002) ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ။ ဦးနှောက် 125: 1014-1023 ။ Doi: 10.1093 / ဦးနှောက် / awf108
16 ။ Stoleru ကို S, et al Gregoire MC, Gerard: D, Decety J ကို, Lafarge အီး။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထ၏ (1999) Neuroanatomical Correlate ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 28: 1-21 ။
17 ။ Bocher M က, Chisin R ကို, Parag Y ကို, ဖရီးမနျး N ကို, Meir Weil Y ကို, et al ။ လိင်ကွဲယောက်ျားတစ်ဦး 2001O-H15O ပေလေ့လာမှု: တစ်ညစ်ညမ်းကလစ်တုံ့ပြန်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဆက်စပ် (2) ဦးနှောက်ကို Activation ။ Neuroimage 14: 105-117 ။ Doi: 10.1006 / nimg.2001.0794
18. Redoute J, Stoleru S, Gregoire MC, Costes N, Cinotti L, et al ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (2000) ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ Hum ဦး နှောက် Mapp 11: 162-177 ။ Doi: 10.1002 / 1097-0193 (200011) 11:3<162 :: အကူအညီ -hbm30> 3.0.co; 2- တစ်
19 ။ ရှင်ပေါလုသည် T, Schiffer B, Zwarg T က, Kruger TH, Karama S က, et al ။ လိင်ကွဲများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများအတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ (2008) ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှု။ Hum ဦးနှောက် Mapp 29: 726-735 ။ Doi: 10.1002 / hbm.20435
20 ။ Ferretti တစ်ဦးက, Caulo M က, et al Del Gratta ကို C, Di Matteo R ကို, Merla တစ်ဦး။ အထီးလိင်စိတ်နိုးထ၏ (2005) Dynamics ကို: fMRI အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသဦးနှောက်ကို Activation ၏ကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများကို။ Neuroimage 26: 1086-1096 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2005.03.025
21 ။ Hamann က S, Herman RA, Nolan CL, ဝေါ်လဲန်ငွေကျပ် (2004) ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ amygdala တုံ့ပြန်ကွာခြား။ နတ် neuroscience 7: 411-416 ။ Doi: 10.1038 / nn1208
22 ။ မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းဆုလာဘ်၏ Sescousse, G, Caldu X ကို, Segura B, Dreher JC (2013) ထုတ်ယူခြင်း: လူ့အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှုများတစ်အရေအတွက် Meta-analysis သည်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience Biobehav ဗြာ 37: 681-696 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2013.02.002
23 ။ Kuhn က S, Gallinat J ကို (2014) ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု Doi: 10.1001 / jamapsychiatry.2014.93
24 ။ မိုင်းလုပ်သား MH, Raymond N ကို, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ထကြွလွယ်သောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ Mueller BA, လွိုက် M က, Lim က KO (2009) ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 174: 146-151 ။ Doi: 10.1016 / j.pscychresns.2009.04.008
25 ။ သံမဏိ VR, Staley ကို C, Fong သည် T-, Prause N ကို (2013) လိင်ဆန္ဒမဟုတ်ဘဲ hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်ရူးနှမ်း neurophysiological တုံ့ပြန်မှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Socioaffect neuroscience Psychol 3: 20770 ။ Doi: 10.3402 / snp.v3i0.20770
26 ။ Voon V ကို, ခေါင်းဆောင် Hassan K ကို Zurowski M က, က de Souza က M, Thomsen T က, et al ။ ပါကင်ရောဂါအတွက်ထပ်တလဲလဲနှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူတွေ၏ (2006) ပျံ့နှံ့နေတဲ့။ အာရုံကြော 67: 1254-1257 ။ Doi: 10.1212 / 01.wnl.0000238503.20816.13
27 ။ Weintraub: D, Koester J ကို, Potenza MN, Siderowf အေဒီ, Stacy M က, et al ။ ပါကင်ရောဂါအတွက် (2010) Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: 3090 လူနာ cross-section လေ့လာမှု။ Arch Neurol 67: 589-595 ။ Doi: 10.1001 / archneurol.2010.65
28. Kataoka H၊ Shinkai T, Inoue M, Satoshi U (2009) သည်ပါကင်ဆန်ရောဂါတွင်သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးလည်ပတ်မှုတိုးပွားလာခြင်း၊ Mov Disord 24: 471-473 ။ Doi: 10.1002 / mds.22373
29. Politis M, Loane C, Wu K, O'Sullivan SS, Woodhead Z, et al ။ (2013) ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine ကုသမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည့် hypersexuality ရှိအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများကိုအာရုံကြောတုန့်ပြန်မှု။ ဦး နှောက် 136: 400-411 ။ Doi: 10.1093 / ဦး နှောက် / aws326
30 ။ ပယ်ရီ, DC, Sturm, et al Seeley WW, Miller က BL, Kramer JH, ့။ (2014) Anatomical အပြုအမူမူကွဲ frontotemporal နှောက်အတွက်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူတွေ၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဦးနှောက် Doi: 10.1093 / ဦးနှောက် / awu075
31 ။ Somerville LH, Casey BJ (2010) သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များ Developmental neurobiology ။ Curr Opin Neurobiol 20: 236-241 ။ Doi: 10.1016 / j.conb.2010.01.006
32 ။ Delmonico DL, Miller ကဂျေအေ (2003) အင်တာနက်လိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်: Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်။ လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကုထုံး 18 ။ Doi: 10.1080 / 1468199031000153900
33 ။ ရိဒ် RC, လက်သမား BN, Hook ဖြစ်မှု, Garo S က, Manning JC, et al ။ hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-2012 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိချက်များ (5) အစီရင်ခံစာ။ J ကိုလိင် Med 9: 2868-2877 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2012.02936.x
35 ။ Sheehan DV, Lecrubier Y ကို, Sheehan KH, Amorim P ကို, Janavs J ကို, et al ။ (1998) က Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (MINI): DSM-IV နှင့် ICD-10 များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဖြေရှာတဲ့စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် validation ကို။ လက်တွေ့စိတ်ရောဂါကုသမှု 59 ၏ဂျာနယ်: 22-33 ။ Doi: 10.1016 / s0924-9338 (97) 83296-8
36 ။ Whiteside SP, Lynam DR (2001) ကငါးအချက်မော်ဒယ်နှင့် Impulse: Impulse ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ 30: 669-689 ။ Doi: 10.1016 / s0191-8869 (00) 00064-7
37 ။ Beck ကို AT, ရပ်ကွက် CH, Mendelson M က, ကဲ့ရဲ့ J ကို, Erbaugh J ကို (1961) စိတ်ကျရောဂါကိုတိုင်းတာဘို့တစ်ခုစာရင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 4: 561-571 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.1961.01710120031004
39 ။ Saunders JB, Aasland ဩဃ, Babor TF, de la Fuentes JR, ထိုအရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း Disorders သတ်မှတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း (စာရင်းစစ်) ၏ Grant က M ကို (1993) ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: အန္တရာယ်အရက်စားသုံးမှု-II ကိုအတူ Persons ၏အစောပိုင်းထောက်လှမ်းခြင်းအပေါ် WHO ကပူးပေါင်းစီမံကိန်း။ စွဲ 88: 791-804 ။ Doi: 10.1111 / j.1360-0443.1993.tb02093.x
40. လူငယ် KS (1998) အင်တာနက်စွဲခြင်း - လက်တွေ့ရောဂါအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်း။ Cyberpsychology & အပြုအမူ ၁: ၂၃၇ - ၂၄၄ ။ Doi: 1 / cpb.237
41. Meerkerk GJ, Van Den Eijnden RJJM, Vermulst AA, Garretsen HFL (2009) Compulsive Internet Use Scale (CIUS): အချို့သော Psychometric Properties များ။ Cyberpsychology & အပြုအမူ ၁၂: ၁-၆ ။ Doi: 12 / cpb.1
43 ။ McGahuey, CA, Gelenberg AJ, Laukes, CA, Moreno အက်ဖ်အေ, Delgado PL, et al ။ (2000) ကအရီဇိုးနားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံစကေး (ASEX): ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှု။ J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 26: 25-40 ။ Doi: 10.1080 / 009262300278623
44 ။ Murray GK, Corlett PR စနစ်, Clark က L ကို, Pessiglione M က, ဘလက်ဝဲလ်အေဒီ, et al ။ (2008) Substantia nigra / စိတ္တအတွက် ventral tegmental ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းအမှားနှောင့်အယှက်။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 13: 239, 267-276 ။ Doi: 10.1038 / sj.mp.4002058
45 ။ Martinez: D, Slifstein M က, Broft တစ်ဦးက, Mawlawi အို Hwang DR, et al ။ (2003) positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူလူ့ mesolimbic dopamine ဂီယာ Imaging ။ အပိုင်း II ကို: အ striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab 23: 285-300 ။ Doi: 10.1097 / 00004647-200303000-00004
46 ။ Maldjian ဂျာ Laurienti PJ, Kraft RA, Burdette JH (2003) fMRI ဒေတာအစုံ၏ neuroanatomic နှင့် cytoarchitectonic Atlas-based စစ်ကြောရေးများအတွက်တစ်ဦး automated နည်းလမ်း။ Neuroimage 19: 1233-1239 ။ Doi: 10.1016 / s1053-8119 (03) 00169-1
47 ။ ဝီလျံသည် SM, ထိုမျောက် mesofrontal dopamine စနစ်၏ Goldman-Rakic ​​PS (1998) နေရာအနှံ့ဇာစ်မြစ်။ Cereb Cortex 8: 321-345 ။ Doi: 10.1093 / cercor / 8.4.321
48 ။ Shackman AJ, Salomon တီဗီ, Slagter HA, Fox က AS, ဆောင်းရာသီ JJ, et al ။ (2011) အနုတ်လက္ခဏာများ၏ပေါင်းစည်းမှုသည် cingulate cortex အတွက်နာကျင်မှုများနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းချုပ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ နတ်ဗြာ neuroscience 12: 154-167 ။ Doi: 10.1038 / nrn2994
49 ။ Shenhav တစ်ဦးက, Botvinick MM, Cohen ကို JD (2013) ထိန်းချုပ်မှု၏မျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက်: anterior cingulate cortex function ကိုတစ်ဦး Integrated သီအိုရီ။ အာရုံခံဆဲလျ 79: 217-240 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2013.07.007
50 ။ Wallis ဟာ JD, Kennerley SW (2010) သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများ prefrontal cortex ၌တည်၏။ Curr Opin Neurobiol 20: 191-198 ။ Doi: 10.1016 / j.conb.2010.02.009
51 ။ Rushworth MF, လမ်းပြ Noonan အမတ်, Boorman ED, ဝေါ်လ်တန် ME, ဘီရန်း TE (2011) တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ဆုလာဘ်-guided သင်ယူမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ 70: 1054-1069 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2011.05.014
52 ။ ဆုလာဘ်များနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်. anterior cingulate cortex multiplexing သတင်းအချက်အလက်အတွက် Hayden BY, Platt ML (2010) တွင် neuron ။ J ကို neuroscience 30: 3339-3346 ။ Doi: 10.1523 / jneurosci.4874-09.2010
53 ။ Rudebeck PH သည်, ဘီရန်း TE, Kennerley SW, Baxter MG, Buckley MJ, et al ။ (2008) တိုကျရိုကျ cortex ငျဒသေလုပ်ရပ်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားရွေးချယ်မှုအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍကစား။ J ကို neuroscience 28: 13775-13785 ။ Doi: 10.1523 / jneurosci.3541-08.2008
54 ။ Warren, CA, McDonough ဆေးလိပ်သောက် cue-reactivity ကို၏အညွှန်းကိန်းများအဖြစ် (1999) Event-related ဦးနှောက်အလားအလာ BE ။ Clin Neurophysiol 110: 1570-1584 ။ Doi: 10.1016 / s1388-2457 (99) 00089-9
55 ။ Heinz M က, Wolfling K ကို Grusser သည် SM (2007) Cue-သွေးဆောင်အာရုံရက်အတွက်အလားအလာ evoked ။ Clin Neurophysiol 118: 856-862 ။ Doi: 10.1016 / j.clinph.2006.12.003
56 ။ Lubman ပစ, Allen က NB, ပီတာ LA က, Deakin JF (2008) မူးယစ်ဆေးတွေကို opiate စွဲအခြားအကျိုးသက်ရောက်စေလှုံ့ဆော်မှုထက် သာ. ကြီးမြတ် salience ရှိသည် Electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ J ကို Psychopharmacol 22: 836-842 ။ Doi: 10.1177 / 0269881107083846
57 ။ Euser AS, Arends LR, အီဗန် BE, Greaves-သခင်ဘုရား et al K ကို Huizink AC အ။ (2012) ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များအတွက် neurobiological endophenotype အဖြစ် P300 ဖြစ်ရပ်-related ဦးနှောက်အလားအလာ: တစ် Meta-သရုပ်ခွဲစုံစမ်းစစ်ဆေး။ neuroscience Biobehav ဗြာ 36: 572-603 ။ Doi: 10.1016 / j.neubiorev.2011.09.002
58 ။ ဘိန်းဖြူမှီခိုအတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သိမြင်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အ Franken ih, Stam CJ, Hendrik VM က, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က (2003) Neurophysiological သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology (Berl) 170: 205-212 ။ Doi: 10.1007 / s00213-003-1542-7
59 ။ Franken ih, Hulstijn KP, Stam CJ, Hendrik VM က, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က (2004) ကိုကင်းတဏှာ၏အသစ်နှစ်ခု neurophysiological ညွှန်းကိန်း: evoked ဦးနှောက်အလားအလာများနှင့် cue modulated ထိတ်လန့်တုံ့ပြန်မှု။ J ကို Psychopharmacol 18: 544-552 ။ Doi: 10.1177 / 0269881104047282
60 ။ ဗန်က de Laar MC, Licht R ကို, Franken ih, Hendrik VM က (2004) Event-related အလားအလာ abstinent ကိုကင်းစွဲထဲမှာကိုကင်းတွေကိုစိတ်ခွန်အားနိုးဆက်စပ်မှုဖော်ပြသည်။ Psychopharmacology (Berl) 177: 121-129 ။ Doi: 10.1007 / s00213-004-1928-1
61 ။ Dunning JP, Parvaz MA, Hajcak, G, Maloney T က, Alia-Klein N ကို, et al ။ ကိုကင်းနှင့်အ ERP လေ့လာမှု abstinent နှင့်လက်ရှိကင်း-တစ်ဦးသည်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ခံစားမှုတွေကိုမှ (2011) လှုံ့ဆော်အာရုံစူးစိုက်မှု။ EUR J ကို neuroscience 33: 1716-1723 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2011.07663.x
62 ။ Linden DE (2005) က p300: ဦးနှောက်ထဲမှာထုတ်လုပ်နေသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြဘူးဘယ်မှာ? အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် 11: 563-576 ။ Doi: 10.1177 / 1073858405280524
63 ။ Sowell ER, Thompson ကလေး, ကေတီဟုမ်း CJ, Jernigan TL, Toga AW (1999) တိုကျရိုကျနှင့် striatal ဒေသများတွင် Post-ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်ရငျ့အဘို့အ Vivo သက်သေအထောက်အထား၌။ နတ် neuroscience 2: 859-861 ။ Doi: 10.1038 / 13154
64 ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများကုန်သည်များ RA, တေလာ JR, Potenza MN (2003) Developmental neurocircuitry: စွဲအားနည်းချက်၏အရေးပါသောကာလ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 160: 1041-1052 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.160.6.1041
65 ။ သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Parra အီး, Penn J ကို, Voss H ကို, et al ။ (2006) orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ J ကို neuroscience 26: 6885-6892 ။ Doi: 10.1523 / jneurosci.1062-06.2006
66 ။ Smith က DG ရှိမုန်ဂျုံးစ် P ကို, Bullmore ET, Robbins TW, Ersche KD (2014) Enhanced orbitofrontal cortex function ကိုများနှင့်အပန်းဖြေလှုံ့ဆော်သည်အသုံးပြုသူများအတွက်ကိုကင်းတွေကိုအာရုံစိုက်ဘက်လိုက်မှုမရှိခြင်း။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 75: 124-131 ။ Doi: 10.1016 / j.biopsych.2013.05.019
67 ။ Co-ဖြစ်ပေါ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်လိင်ကွဲပြားမှု: ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအတွက် Grant က je, Williams က ka, Potenza MN (2007) Impulse-ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု 68: 1584-1592 ။ Doi: 10.4088 / jcp.v68n1018
68 ။ Poldrack RA, ဖလက်ချာကို PC, Henson RN, Worsley KJ, Brett M က, et al ။ တစ်ဦး fMRI လေ့လာမှုအစီရင်ခံဘို့ (2008) လမ်းညွှန်ချက်များ။ Neuroimage 40: 409-414 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2007.11.048